Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်...
Myanmar IT Resource Forum » PROGRAMMERS ZONE » » Batch File Programming » Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်...
1 Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်... on 8th April 2009, 3:32 pm
ကျွန်တော်ကတော့ hack ဘက်ရောက်တယ်ထင်လို့ဒီမှာတင်တာပါ...အမြင်မတော်ရင်လည်း ဆရာသမားတွေ ရွှေ့မှာပေါ့ဗျာ...
Internet Cafe တစ်ချို့ဟာ Task manager ပိတ်ထားတတ်ကြပါတယ်...အဲလိုပိတ်ထားတော့ Key logger လိုဟာမျိုး Run ထားရင်ကိုယ်ကလည်း မသိတော့ သေပြီပေါ့ဗျာ....
အဲလို မျိုးဖျောက်ထားရင် ပြန်ဖော်လို့ရမယ့် နည်းရှိပါတယ်....
set /p "ac=Action : "
) else (START !Explore! "!exepath!")
အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ Code တွေကို Notepad မှာ ကူးထည့်လိုက်ပါ...ပြီးရင် အဲဒီ Notepad ကို Save as ကနေပြီးတော့ Taskmanager.bat လို့ နာမည်ပေးပြီးတော့ Save မှတ်လိုက်ပါ...
ပြီးရင် အဲဒီ .bat File လေးကို Double Click ခေါက်လိုက်ရင် Task manager Enable ဖြစ်သွားပါပြီ...စမ်းကြည့်လိုက်ပါ...မရရင်လည်း ပြန်ပြောပေါ့ဗျာ...
2 Re: Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်... on 8th May 2009, 6:33 pm
ဒါကတော့ Task Manager ကိုပိတ်ထားတာကို ဖြည်ရင်းနဲ့ တစ်ခါတည်း Timer ကိုပိတ်ဖို့နည်းပါ
How To Disable The Timer On The Computers On In Internet Cafe's.
ကျနော်တို့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Desktop မှာ Right click ခေါက်ပြီးတော့
New>>Text Document တစ်ခု ယူလိုက်ပါ..
ပြီးရင် အဲဒီ့ထဲမှာ CMD ဆိုပြီးတော့ စာတစ်ကြောင်းရိုက်ထည့်ပေးပါ
ပြီးရင် အဲဒီ့ Text Document ကို Batch File(*.bat) အနေနဲ့သိမ်းပေးပြီးတော့ Run လိုက်ပါ။
အဲဒါဆိုရင်တော့ Command Prompt တစ်ခု ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
Command Prompt ပွင့်လာပြီဆိုရင် cd\_windows ဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့ directory ကို Windows ဆီကိုပြောင်းပေးပါ
ပြီးရင်တော့ regedit ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ။ ဟီး.. ဒါဆိုရင်တော့ Registry Editor ကျလာပါလိမ့်မယ်။
Registry Editor ထဲမှာ
settings>policies>system" ဆီကိုသွား ပြီးရင် ညာဘက်မှာရှိတဲ့
Disable Taskmanager ဆိုတာကို right click ခေါက်ပြီးတော့ modify
လုပ်ပါမယ်, value ကို "0" ဆိုပြီးတော့ ထားလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Windows Task Manager ကို "CTRL+ALT+DEL/DELETE" နှိပ်ပြီးတော့ ခေါ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Timer ကိုပိတ်လုိက်ရင် ရပါပြီ။
3 Re: Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်... on 21st May 2009, 8:16 pm
4 Re: Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်... on 29th July 2009, 6:02 pm
task manager ကိုပိတ်ထားပေမယ့် command ကနေ run နေတဲ့ Processes တွေကိုကြည့်ပြီး ပိတ်ချင်တာတွေကို ပိတ်လို့ရပါတယ်။
command မှာ tasklist လို့ရိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ရင် run နေတဲ့ Processes တွေကိုတွေ့ရမှာ
taskkill /f /im [Process Name.extension]
[Process Name.extension]မှာပိတ်မယ့် Process Name ကိုရိုက်ပါ။extension ကတော့
Process ရဲ့ extension ဖြစ်ပါတယ်
5 Re: Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်... on 25th September 2009, 9:20 pm
Command Prompt ပါပိတ်ထားတယ်ခင်ဗျ...ဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိတော့ ဘူး...သိတဲ့ လူရှိရင်ပြောပေးကြပါဦးဗျာ
6 Re: Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်... on 26th September 2009, 2:27 am
Command prompt ကို တော့ ဒီနည်းကလေးနဲ့ စမ်းကြည့်ပါဦးဗျာ ...
start- run - regedit ကို ရိုက်ပြီးရင်တော့
HKEY_CURRENT_USER \_ Software\_Microsoft\_Command
ကအဲဒီ့ အထိ ရောက်ရင်တော့ 1 ကို ပေးရင်တော့ enable ဖြစ်သွားတာပေါ့ ဗျာ ...0ဆိုရင်တော့
disable ဖြစ်သွားမယ် ဗျာ ။။ စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး ...အဆင်မပြေရင် ပြောပါဗျာ ...
7 Re: Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်... on 26th September 2009, 4:20 am
Koannku wrote: Command Prompt ပါပိတ်ထားတယ်ခင်ဗျ...ဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိတော့ ဘူး...သိတဲ့ လူရှိရင်ပြောပေးကြပါဦးဗျာ
ဒီမှာ ကျွန်တော်တင်ထားတာလေးနဲ့ အရင်စမ်းကြည့်ပါအုံး ။
8 Re: Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်... on 26th September 2009, 8:45 am
cmd နဲ့ registery ကိုပိတ်ထားရင် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ကိုယ့် Desktop ရဲ့ လွတ်တဲ့နေရာမှာ right click >> > new >>> Shortcut အသစ်လုပ်လိုက်ပါ။အဲဒီ့ထဲမှာ cmd လို့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက် command prompt ကိုသုံးလို့ရပါလိမ့်မယ်။
နောက် registery ကိုဖော်ချင်ရင်တော့ Shortcut ဆိုတဲ့နေရာမှာ regedit လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် ရပြီ။
ဒါပေမယ့် run ကိုပိတ်ထားလို့ခေါ်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့မသိသေးဘူး
9 Re: Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်... on 26th September 2009, 12:01 pm
ဆိုပြီးရိုက်ပြီးရင် .bat နဲ့သိမ်းပြီးစမ်းကြည့်ပါလား
10 Re: Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်... on 26th September 2009, 3:53 pm
run ကို ပြန်ခေါ်ချင်ရင် နည်3းနည်းရှိပါတယ် .. Start Menu အောက်က ပြန်ထည့်တာနဲ့  နောက် registry နဲ့ gpedit မှာ ပြင်တာပါ
11 Re: Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်... on 26th September 2009, 7:06 pm
12 Re: Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်... on 27th September 2009, 4:40 pm
1 . Start Menu ကဆိုရင်တော့ Right Click on Start Menu - Properties - Customize on Start Menu - And Check on Display Run ... ဒါဆိုရပါပြီ [You must be registered and logged in to see this image.]
2. နောက်တစ်ခုကတော့ gpedit ကနေ ၀င်ရပါမယ် .. gpedit ကို system 32 အောက်က gpedit.msc ကနေ၀င်လိုက်ပါ ..
ပြီးတော့ Administrative Templates - Start menu and Task bar -ပြီးရင် ဒါကို တွေ့ မှာပါ .. Remove Run menu from Start Menu အဲမှာ Double Click နှိပ်ပြီး enable ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါ .. ဒါဆိုရပါပြီ [You must be registered and logged in to see this image.]
3. Registry ကနေပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ system32 အောက်မှာ regedit32.exe ကို ၀င်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် အောက်က လမ်းကြောင်း အတိုင်းသွားလိုက်ပါ ..
ရောက်ပြီဆိုရင် NoRun ဆိုတာလေး ကို Delete လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ ဗျာ .. [You must be registered and logged in to see this image.]
ဒါဆို လုံလောက်ပြီ ထင်ပါတယ် ဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.]
13 Re: Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်... on 27th September 2009, 9:57 pm
Quote တော့ပြန်မလုပ်တော့ဘူး ကျေးဇူးပဲ ကိုနေရိုင်းရေ....
14 Re: Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်... on 6th November 2009, 8:54 am
kohtet wrote: Command prompt ကို တော့ ဒီနည်းကလေးနဲ့ စမ်းကြည့်ပါဦးဗျာ ...
အကို ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျ။ဒီတိုင်းပဲ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
15 Re: Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်... on 6th November 2009, 2:04 pm
ကျွန်တော်ကတော့ taskmanager ပိတ်ထားတဲ့ဆိုင်ဆိုရင်သုံးချင်စိတ်မရှိဘူး
စိတ်ပိန်တယ် တစ်ခါတစ်လေဆိုရင် အော်လုံလှပြီထင်နေလားလို့ အပေါ်မှာပေးထားသလိုလုပ်ရင်ဘာလဲဆိုင်ကမောင်းထုတ်မှာလားလို့မေးလိုက်ချင်တယ်
16 Re: Internet Cafe မှာ Task Manager ပိတ်ထားရင်...